tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-07-18
MIARAHABA! Ny fenitra "Torolàlana ho an'ny mpanamory fiaramanidina anatiny momba ny fanodinana ny faneriterena amin'ny alàlan'ny fanamafisana" izay neken'ny orinasa anay dia nankatoavin'ny Fikambanan'ny kalitaon'ny vokatra Zhejiang ho "critère de qualité" ho an'ireo vondrona mpamokatra zhejiang ...
Ahoana no fiasan'ny valizy Solenoid?
Inona no atao hoe solenoid? Solenoid dia teny mahazatra amin'ny coil of wire ampiasaina ho electromagnet. Izy io koa dia manondro ny fitaovana rehetra manova ny angovo herinaratra ho angovo mekanika amin'ny fampiasana solenoid. Ny fitaovana dia mamorona sahan'andriamby avy amin'ny herinaratra ary mampiasa ny sahan'andriamby hamoronana linea ...
2020, miaraka isika mandalo
Mandeha ny fotoana, ao anatin'ny indray mipy maso dia lasa ny antsasaky ny taona 2020. Ireo orinasa sy mpiasa na dia izao tontolo izao aza dia efa nandalo fitsapana vaovao tao anatin'ny enim-bolana lasa noho ny COVID-19. Tamin'ny fiandohan'ny taona 2020, tratry ny trangan'aretina, nanomboka ny orinasa d ...